Fianarana teny Anglisy - Sekolin'ny Fiteny Afovoany, Cambridge
Misokatra indray ny 14 septambra 2020, ny Sekolin'ny fiteny afovoany dia manolotra kilasy ankapobeny amin'ny fiteny anglisy, Intensive English, Part-Time ary fanadinana. Ny fampahalalana momba ireo fampianarana tsirairay ireo dia azo jerena amin'ny fampiasana ny menio amin'ny ankavanana.
Isika dia mandray ireo mpianatra mandritra ny taona ary tsy manakaiky ny vanim-potoan'ny Krismasy.
Manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Aogositra 2020 dia manome kilasy an-tserasera ny Sekolin'ny fiteny afovoany satria mikatona ny sekoly any Cambridge noho ny valanaretina Covid-19. Azafady mba mifandraisa aminay mivantana ny fisian'ny kilasy an-tserasera.
Ny lalanao sy ny fandaharam-potoanao
Mety hiankina amin'ny lanjanao ny fianaranao, noho izany dia omentsika ny fanombanana fandaharana rehefa tonga ianao. Azonao atao koa ny mandray ny Cambridge English test, izay hilaza aminao hoe inona ny fanadinanao mety ho afaka hiomana. Ity no torolàlana iray, noho izany dia hanoro hevitra anao ianao raha manao dingana.
Ny fianarana manontolo andro dia antsoina General English (Ora 15 ora isan-kerinandro) na English intensive (Ora 21 isan-kerinandro). Lesona isa-maraina isaky ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, 09: 30 mandra-13: 00 miaraka amin'ny kafe-break ao amin'ny 11: 00. Raha misafidy Intensive Anglisy dia misy ihany koa ny kilasy ny Talata, Alarobia sy Alakamisy tolakandro eo anelanelan'ny 14: 00-16: 00.
Manolotra kilasimandry hafa koa izahay: amin'ny fotoana rehetra ahafahanao mianatra momba anay Fiofanana ho an'ny tolakandro, izay ampahany amin'ny tolakandron'ny Intensive anglisy, toy ny etsy ambony. Amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, manolotra ny ampaham-potoana izahay Fanombohana ny maraina amin'ny alakamisy, alarobia ary alakamisy avy amin'ny 09: 30 mankany 11.00.
Misy fiaraha-mientana amin'ny tolakandro na takariva amin'ny takariva ho an'ny mpianatra tsirairay, ary manome fomba hafa amin'ny teny anglisy.
Afaka manomboka amin'ny Alatsinainy ianao (ankoatra ny fetim-bahoaka) mandritra ny herinandro farafahakeliny. Ny ankamaroan'ny mpianatra dia mandalina herinandro 4-12. Ny mpianatra sasany dia mianatra hatramin'ny herintaona. Azontsika atao ny manoro anao ny halavan'ny fianarana ilaina mba hanatratrarana tanjona manokana.
Ny haben'ny kilasy ambony indrindra dia 10, fa matetika dia misy eo amin'ny mpianatra 5 sy 7 isaky ny kilasy. Rehefa tonga any amin'ny sekoly ianao dia hanao Testing Placement mba hanombanana ny lanjanao. Dia hapetraka amin'ny kilasy iray araka ny fari-piteninao, ny fahaiza-miteny ary ny tanjona manokana. Amin'ny fampiasana boky fianarana samihafa dia hianatra amin'ny teny Anglisy ianao amin'ny alalan'ny sehatra samihafa miaraka amin'ny fanamafisana ny fifandraisana. Midika izany ny asa roa, ny fifanakalozan-kevitra ary ny kilalao. Afaka manana fahafahana hanitatra ny voambolanao ianao ary hanamafy ny fahalalanao ny fitsipi-pitenenana.
Hanoro hevitra anao ny mpampianatra momba ny fanadinana tsara indrindra ho anao. Azonao atao ihany koa ny fitsapana ny teny anglisy any Cambridge. ny...	Hamaky bebe kokoa